Singazilawula ngcono njani kwaye sizilawule njani iimvakalelo zethu ezingalunganga? | Oomama Namhlanje
Singazilawula ngcono njani kwaye sizilawule njani iimvakalelo zethu ezingalunganga?
Njengabazali, kubalulekile ukuba siziqonde iimvakalelo ezingathandekiyo sazi ukuba ziyimfuneko ukuqhubela phambili ebomini. Iimvakalelo ezingalunganga azimbi kwaphela kwaye kubalulekile ukuba ufundise abantwana ukuba baqonde ukuba zonke iimvakalelo, ezo zithathwa njengezilungileyo kwaye zithathwa njengezimbi, ziyimfuneko ebomini.
Enye yeendlela ezilungileyo zokujongana neemvakalelo zethu ezimbi kukwamkelwa. Esi sisifundo ekufuneka abantwana bafundiswe besebancinci kakhulu. Njengokuba kukho izibonelelo kwiimvakalelo ezingalunganga, sizinyanzela ukuba sonwabe ngalo lonke ixesha inokuba yingozi kwimpilo yethu yonke yeemvakalelo.
Abantwana kufuneka bafundiswe ukuba baqonde ukuba usizi, umsindo, umsindo, umsindo ... ziimvakalelo zendalo kwaye yinto eqhelekileyo ukuziva. Kuphela kukuba kufuneka sifunde ukulawula ezo mvakalelo ngaphandle kolawulo lwabo.
Kuya kufuneka ube ngumzekelo wokwamkela iimvakalelo ezingalunganga, kuthi nakwabanye, bayinxalenye yobuntu, kusivumela ukuba sakhe uvelwano olungcono ngendlela abanokuthi baziveze ngayo kwaye kutheni. Endaweni yokubambeka engqondweni ukuba iimvakalelo ezimbi kufuneka zithintelwe okanye ukuba ngandlela thile 'baphosakele' ukuba babe namava, kufuneka samkele ukuba bayinxalenye yendalo yethu
Nje ukuba sikwenze oko, sinokuqala ngokutshintsha indlela esinokuphendula ngayo kubo kwaye sikhulise isimilo esinentsingiselo kwaye songeze ixabiso kwindlela esiziveza ngayo nakwindlela esidibana ngayo nabanye. Esi iya kuba sisifundo esihle esiza kufundwa ngabantwana, kodwa kubo kuya kufuneka ukuba ube ngumzekelo olungileyo. Cinga ngeemvakalelo zakho xa uziva, cinga ukuba kutheni unazo kwaye ngale ndlela, unokuba nakho ukulawula ngaphezulu. Ukususela ngoku iimvakalelo ezingalunganga azizukuba yingxaki nakubani na!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Intsapho » Singazilawula ngcono njani kwaye sizilawule njani iimvakalelo zethu ezingalunganga?
Uyenza nini i-DNI emntwaneni
Iiklasi zokulungiselela ukubeleka